जब दुई बालकले अनलाइनमार्फत् ४५ हजारको खेलौना मगाए..
आजको विश्व बजारका उपभोक्ताबीच अनलाइन सपिङले जर्वजस्त स्थान बनाएको छ ।
इन्टरनेटबाट विश्वका बजारमा मात्र नभएर नेपालमै पनि समान मगाउने धेरै उपभोक्ताको लिस्ट तयार भइसकेको छ । अझै दराज, अमेजन लगायतका अनलाइन सपिङ कम्पनीले त धेरै उपभोक्तालाई इन्टरनेटमा सर्च गरेरै आफूलाई चाहिने समान मगाउने बानी पारिदिइसकेको छ ।
यसै क्रममा अमेरिकाका दुई बालकले पनि यसको फाइदा उठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाको मिचिगन राज्यको स्टर्लिङ हाइट्स शहरमा रहने वेरोनिका नामकी महिलाका दुई बच्चाले एलेक्सा अनलाइनको सहयोगमा ४० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको समान आमालाई थाहै नदिइ मगाएका छन् । उनीहरुले ४०० डलरको आफूलाई मनपर्ने खेलौन लगायतका समान अनलाइन सपिङमार्फत् मगाएका थिए । आमालाई तबमात्र थाहा भयो जब बालकहरुले अनलाइनमार्फत् मगाएको समान धमाधम ती कम्पनीहरुले घरमै छोड्न ल्याए ।
पहिले त ती महिलालाई लाग्यो क्रिसमस नजिकिएको कारण आफन्तहरुले गिफ्ट पठाइदिए । तर, ती गिफ्टहरुमा पठाउने कसैको पनि नाम नदेखेपछि आमाले बच्चाहरुसँग सोध्दा थाहा भयो कि, उनकी छोरी एरिस र छोरा क्यामरनले आफ्नो क्रिसमस गिफ्ट आफैले खरिद गर्ने कोशिसमा यस्तो गरेका थिए । दुवै बच्चाले ती कम्पनीबाट खेलाौना मात्र मगाएनन् कि, आमाको अमेजन एकाउन्टबाट लिक भएको क्रेडिट कार्डबाट पैसा पनि तिरिसकेका थिए ।
इन्टरनेटमार्फत् गुगल भ्वाइस र ऐलेक्सा जस्तो अनलाइनहरुले सहज रुपमा मानिसहरुको निर्देशन मान्छन् । एलेक्साको सहयोगमा अमेजनका ग्राहकको सेभ लिस्टबाट विभिन्न समान अर्डर बोलेर पनि खरिद गर्न सकिने बताइएको छ ।
मन छुने समय सान्दर्भिक सन्देश, कतै तपाई पनि यहि गल्ति त गर्दै हुनुहुन्न ?
यतिबेला विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणमा रहेको छ । नेपालमा…
कोरोनासँग नडराऔँ, पढौँ यी शुभसमाचारहरू
७ चैत्र । नोबेल कोरोना भाइरसले विश्व यतिबेला त्राहिमाम बनिरहेको…
रहस्यमय पुलः जहाँबाट ६०० कुकुरले आत्महत्या गरिसके (भिडियो सहित)
चिसोबाट बच्न चियाको चुस्की लिँदै वाँदर
संसारभरी भाइरल भयो ब्रा लगाएको भेडा, यस्तो थियो ब्रा लगाउनुको कारण
८ वर्षको उमेरमै कसरी अरबपति भए यी बालक ?
कोरियामा साहुहरुको रुवाबासी ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
कोरोनको त्रासले बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी श्रमिक धेरै स्वदेश…